Global Voices teny Malagasy » Goatemalà: Maximón sy ny fombafomban’ny herinandro masina (paska) hafa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Avrily 2011 8:41 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Teratany
Rehefa ny kolontsainam-pivavahana madiorano iray no voabahan'ny fombam-pivavahana lalina dia lalina an'olona, matetika loatra ny fivavahan'ny mpandresy no terena harahin'ny resy. Saingy, mahita fomba hipongarana hatrany ny kolontsaina efa nitoetra an'arivony taona; Nisy ny nahafahany “nisovoka” tao amin'ny fivavahana Katolika hampidirany ny andriamaniny, ny andriamanimbaviny, ny fombany ary ny fotoam-pivavahany ho anatin'ny singan'ny Katolisisma.
Sary ambany dina Creative Commons attribution license an-i Gustavo Jerónimo.
Maximon no ohatra tsara indrindra amin'izany fiovan'endrika sy vatana izany, araka ny fanazavana ao amin'ny bolongantsary Mi Mundo :
Manazava i Aq’ab’al Audelino Sajvín : “Amin'ny lovantsofina, Maximón no maneho an'i Kaji’ Imox, ny nanjaka farany tamin'ny vahoaka Maya Kaqchikel [nandritra ny fananiham-bohitra Espaniola], izay nofatorana, nampijaliana ary novonoina. Io tantara io moa dia fantatra amin'ny anarana hoe Xkiyüt Xkixïm/Ximon, ka avy amin'izay indrindra no iantsoan'izy ireo azy hoe Maximón: ma dia manondro lehilahy amin'ny fiteny Maya Kaqchikel, ary ny ximón dia midika hoe ilay nafatotra.” Araka ny nolazain'i Aq’ab’al Audelino Sajvín dia nanomboka ny fifangaroam-pivavahana teo amin'i Maximón sy Masindahy Simona rehefa “ hitan'ny Kristiana [conquistadores] fa tsy afa-manongotra ny sarin'ny mpiaro ankamamian'ny vahoaka ry zareo. Hatreo dia naparitaky ry zareo fa mitovy amin'i Masindahy Simona ny Maximón, ary ataon-dry zareo misy ifandraisany matetika amin'i Masindahy Joda, endrika fitaka.”
Singa ara-pivavahana isan-karazany any Goatemalà no mametraka ny Herinandron'ny Paska  (herinandro masina amin'ny teny espaniola na ‘Semana Santa’) ho maningana, tahaka ny “Cucuruchos “, fivorian'ny fiaraha-monina handrary ny Karipetran'ny herinandro masina  vita amin'ny voninkazo, ary dia entin'ny mpivavaka na lahy na vavy eny an-tsorony ny sarim-panjanahatanin'i Jesoa Kristy sy Maria Virijiny ary hanaovany ihany koa ny akanjo nentim-paharazana na dia mafana noho ny toetr'andro fahavaratra aza ny andro.
Fetim-pianakaviana moa ny herinandro masina izay hanasana ny rehetra handray anjara, araka ny hanazavan'ny bolongan-tsary AntiguaDailyPhoto.com  azy:
Araka izay efa nomarihako teo aloha, ny fandrariana karipetra avy amin'ny potikazo, singam-boa-na “pin”, voninkazo, anana isan-karazany dia fombam-piarahamonina. Mifamory ny mpifanolo-bodi-rindrina na ny mpifanakaiky trano handrary karipetra izay hohitsahin'ny mpilahatra araka ny fombam-pivavahana. Indraindray moa dia vitaina mandritra ny alina ny fandrariana karipetra, mandritra ny alina manontolo hahavonona azy ny andro manaraka fanaovana ny filaharana. Tafiditra amin'ny fanomezan-doko ny karipetra avokoa ny ankohonana iray manontolo, ny namana akaiky, ny mpifanolo-bodi-rindrina ary ny fokonolona iray manontolo. Tsy olana i nenibe raha mitoraka ravina corozo (voanio?) kely sy voninkazo maina dorehitra hananganana alfombra kely eo anoloan'ny tranony na ny mpiray vodirindrina no manao izany, na manampy ny rainy ny zanany lahy hamita faramparany ilay karipetra vita amin'ny vovokazo voaravaky ny loko, miatrika amin'izay jerena rehetra ny fahazotoam-bavaka sy ny fanahin'ny fanaovana ny tsara.
Fanamboaran-karipetran-ny Herinandro Masina, saripika Rudy Girón www.Antiguadailyphoto.com (CC BY-NC-SA 2.0)
Antologia del Desengaño  [es] indray manazava ny fomba hafa tanteraka fankalazana ny Herinandro any Santiago Atitlán :
Any Santiago Atitlán, mandritra ny folakandron'ny Zoma Masina, manandratra ny marika ahafantarana ny fahafatesan'i Jesoa Kristy ny olona, fa tsy tahaka izay any amin'ny tontolo tsy teratany dia tsy ahitana zava-mampatahotra ao. Ao am-piangonana dia mandray anjara amin'ny filaharana miaraka amin'ny mozika trombones sy “chirimias ” ny olona, tsy misy alahelo ao, fa fanajana ny fotoam-pivavahana ihany, ary tsy mahazo ahitana endrika fahoriana na alahelo misoritra eny amin'ny mpanatrika.
Manankarena loko, emboka ary fivavahana ny Herinandro Masina any Goatemalà. Traikefa ara-kolontsaina, ara-panahy ary ara-tsakafo ho an'ny mponina sy ny vahiny ao amin'ity firenena manana fiteny mihoatra ny 24 sy vondrona teratany [vazimba] ity ireny. Miara-dalana ny tsara indrindra avy amin'ny tontolo samihafa hiara-hahita sy hianoka ny hatsara-tarehy amin'ny fifangaroana, fa tsy amin'ny alalan'ny fanerena ny hafa hanaraka ny kolontsainy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/22/16558/
 Mi Mundo: http://www.mimundo-photoessays.org/2010/10/maximon-and-worship-of-saint-simon.html
 Herinandron'ny Paska: http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_week
 Karipetran'ny herinandro masina: http://antiguadailyphoto.com/2011/04/19/antigua-holy-week-carpets/
 Antologia del Desengaño: http://angelgt.blogspot.com/2011/04/el-poder-del-rijlaj-mam-maximon-ii.html
 Santiago Atitlán: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Santiago_Atitl%C3%A1n